Hadal guux badan iyo shaki abuuray oo ka soo yeeray Madaxweyne Erdogan | Allbanaadir.com
Home MUQDISHO Hadal guux badan iyo shaki abuuray oo ka soo yeeray Madaxweyne Erdogan
Hadal guux badan iyo shaki abuuray oo ka soo yeeray Madaxweyne Erdogan
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadal lama filaan ah oo kasoo yeeray ku sheegay in Turkey ay u baahan tahay inay yeelato dastuur cusub, taasoo abuurtay guux badan oo ku saabsan inuu doonayo inuu xukunka sii dheereysto.
Turkey ayaa la filayaa inay doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha qabato bisha June ee 2023, taasi oo macnaheedu yahay in xukunka Erdogan uu dhammaan doono 2028, haddii dib loo doorto.
Hase yeeshee kadib markii uu guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee Isniintii, ayaa Erdogan wuxuu soo jeediyey in la qaato dastuur cusub oo beddelaya midka hadda jira oo la isticmaalayey tan iyo 1982-kii, kadib afgambi militari oo dhacay.
“Way caddahay in isha dhibaatooyinka Turkey ay tahay in dastuurka ay qoreen kuwii dowladda afgambiyey, Waxaa la joogaa waqtigii dib loo furi lahaa doodda dastuur cusub. Haddii aan isku fahanno xisbiga talada nala wadaaga, tallaabo ayaan mustaqbalka ka qaadi karnaa dastuurka,” ayuu yiri Erdogan.
Erdogan, oo 66 jir, ayaa Ra’iisul wasaare ama Madaxweyne ka ahaa Turkey tan iyo 2002, isaga oo mar ka bad-baaday isku day afgambi.
Waxa uu sanadii 2017 gadaal ka riixay isbeddel lagu sameeyey dastuurka, oo lagu baabi’iyey jagada ra’iisul wasaaraha, laguna abuuray mid madaxweyne.
Waxa uu kadib 2018-kii ku guuleystay xilka madaxweynaha, taasi oo ah xilliga koowaad ee labada muddo xileed ee ka kooban min shanta sano, ee dastuurka u ogol yahay muwaadinka inuu madaxweyne noqdo.
Previous articleGudoomiye Caanaboore oo shir gudoomiyay kulan looga hadlay arimo Muhiim ah (Sawirro)
Next articleBeesha caalamka oo dhowr qodob uga digtay madaxda ku Shirsan Dhuusamareeb